The Abode of McThag: I Am The Captain Here!
Shan iyo toban Ruux oo saaran nin dhintay xabadka. Ho ho ho iyo dhalo rumay!
Cab iyo shaydaan ayaa sameeyay intii hartay
Yo ho ho iyo dhalo rum.
lammaanaha waxaa hagaajiyay mashiinka bosun
Bosun wuxuu ku faashaday marlinspike
Oo hunguriga hunguriga ayaa loo calaamadiyey inuu caaro
Waxaa lagu qabtay faraha toban;
Oo halkaasay jiifsadeen, raggii wanaagsanaa oo dhammuna way wada dhinteen
Sida jabsiga maalinle ee booli-boobe, Yo ho ho iyo dhalo caano ah!
Shan iyo toban nin oo liiska lixda markab oo dhami, Yo ho ho iyo dhalo caano ah!
Dhinteen oo la xukumay inta soo hartayna ay liqeen!
Ho ho ho iyo dhalo rumay!
Kabtanka ayaa seexday isagoo duleelkiisa gashaday
Halkaas oo fajashku uu dhabanka ka soo baxay
Hadana afartii jeer ayaa la garaacay
Oo halkaasay jiifsadeen, iyo cirwareenno cirro leh
Hoos udhac indhaha kor u kaca
Qorrax dhaca iyo qorrax dhaca, Yo ho ho iyo dhalo caano ah
Shan iyo toban nin oo ad-adag oo qalloocan, Yo ho ho iyo dhalo caano ah!
Toban ka mid ah shaqaalaha markabka ayaa leh sumadda dilka! Ho ho ho iyo dhalo rumay!
T Faashad muruq galaas ama waqiyam ah macdanta "lead"
Ama dalool yaashiinka ku jirta madaxa dillaacsan
Iyo xujayda 'kuxiran casaan guduudan
Oo iyana halkaasay jiifsadeen, bal eeg, indhahayga way dayaan
Dhammaan nafta waxay ku xidhan yihiin caqli-gal, Yo ho ho iyo dhalo caano ah!
Shan iyo toban nin oo wanaagsan oo run ah, Yo ho ho iyo dhalo caano ah!
Ev'ry nin jaakada ayaa ku rari kara Old Pew,
Waxaa xabadka ka yaal xabadka dahabka Isbaanishka
Iyada oo tan oo saxan ah ay ku jirto dhexda
Iyo xadhkaha waaweyn oo aan la tirin karin,
Oo waxaa la jiifsaday halkaas kuwa tuubada qaatay
Iyada oo dhalaalaysa aragooda iyo bushimahooda ayaa carrab la '
Intii aan wada wadaagi jirnay sharciga suulka,
Inbadan ayaa lagu arkay shaashadda sternlight ...
Shuruucda shaki kuma jiro meeshii ay haweenay joogi lahayd
Yo ho ho iyo dhalo rum
Wuxuu ku beddelay sariirti jiifa
Iyada oo la adeegsaday dirk slit shaashadda iyada oo laabta booska
Oo xadhiggu wuu qallalan yahay isagoo dheecaan leh
Oh waxay ahayd wench ama gabar shudderin ah
Taasi waxay ku adkaysatay mindida waxayna qaadatay gubashada
Eebbe! Waxay haysatay alaab loogu talo galay caws jare ah, Yo ho ho iyo dhalo caano ah.
Shan iyo toban nin oo saaran xabadka nin dhintay, Yo ho ho iyo dhalo caano ah!
Waxaan ku wada duudduubnay 'dhammaanteen si isku xirnaan' ah
Iyada oo laba jeer toban laab la wareegid ah hawlwadeenka
Oo waxaan maqalnay 'aragtida' iyo aragtida
Iyada oo leh Yo-culus-Ho! iyo nolol wanaagsan
Iyo si kadis ah oo qalqal leh oo qalloocan
Toban xabo oo qoto dheer ayaa ku socota wadada cadaabta, Yo ho ho iyo dhalo caano ah!
Terrapod 20 September, 2019 07:02
Angus McThag 20 September, 2019 08:29
Google Translate claims this is Somali.